Inkastoo Durdur iyo Dabbaal Galo Doofaar Abidkii ma Daahiro
(“Diridhabe iyo Maqaaladiisa”)
Qore. Feysal Rashiid “Nayruus”
Waxaa hubaal ah marka laga reebo, Nabi Aaden(SCW) oo laga abuuray Ciid (dhoobo), Xaawo oo iyana laga beeray Feerta Nabi Aaden(ScW) iyo Nabi Ciise (SCW) oo laga abuuray Ruux. in dhammaan Aadamaha ay ka beermeen Hooyo iyo Aabbe. Marka lagasoo gudbo 9-ka bilood ee ay hooyadu uurka kusiddo, ilamaha waxa uu dhashaa isaga oo Islaam(Fidrada islaamka)ah waxaase gaal ka dhigi kara amma Muslinba labadiisa waalid sida uu inoo caddeeyay Rasuulkeena Suuban Maxammed Ibnu C/llaahi (SCW), Waxaana u faray waalidiinta markay ilmo dhalaan in dhegaha looga edaamo, Timir amma wixii markaas Macaan ee la hayo carrabka loo saaro…. Waxaana xaqiiqo ah in arrintani ay ku jirto amma ka turjumayso xikmad sii xeel dheer. Waxaana ka mida in Sabigu dareemo macaanka diinta, in carrabkiisa la barbaaro hadalada suubban kuna hadlo hadallo wanaagsan oo ilaahay raali uga yahay.
Haddii aan usoo noqono dhanka bulshadeena somaliyeed, ma jiro ku dhaqan dhab ah oo shareecada iyo diinta islaamka ah, laakiin ilaahay mahadi haka gaadhee umado badan waa dhaanaa, dhaqan wanaagsan iyo dadnimo intaba waa leenahay. Haddaba wiilka soomaliyeed marka u dhasho illaa inta uu ka gaadho xilli uu ka xaadiri karo dugsi quraan iyo iskuulba tarbiyayntiisa iyo hagaajintiisa waxaa 100% gacanta ku haya waa labadiisa waalid, gaar ahaana hooyada. Hooyadu haddii ay ilmaheda si wacan u tarbiyayso anshaxa wanaagsanna barto waxaa loo badiya in ilmaahaasi gaaro guulo badan, dadka ka waawayna ka kasbado duco badan oo ilmaha ka saacida marxaladaha badan ee ku seensaaban, haddiise ay hooyadu dayacdo tarbiyadiisa iyo toosintiisa dhib badan ayaa ugu sugan. Marka uu gaaro xilligii dugsiga waxaa tarbiyada ilamaha kala qayb qaata macalinka wiilka, macalinkana wuxuu guulo ka keeni karaa masuuliyaddaas marka ay waalidiintu u heellan yihiin inay wax kala qabtaan tarbiyaynta dibudhiska maskaxeed ee wiilka amma gabadha. Taasina ma aha mid si buuxda loogu kalsoonaan karo haddii la waayo wada shaqayn. Dhanka kale marka uu ilmuhu barbaaro, qaan gaadhna yahay waxa u kordha cilmi iyo waaya aragnimo illaa u ka gaaro heer u garaadkiisa iyo garashadiisa isku maamulo, xilligaas hadduu gaadhana waalid iyo macalin toona wax gacanta ugu jiraa ma jiraan, haddaba waxay goostaan waa uun wixii ay beerteen. In bulshadu uducayso iyo inay habaaraan oo dhahaan Caku kanna maxaa dunida keenay waxay ku xirantahay silsiladdan Afar geeska ah (waa shaqsiga, macalinkiisa iyo labadiisa waalid). Waxaa soo raaca deegaanka iyo bulshada uu kamidka yahay.
Wiilka ducaysan ee sida fiican loosoo ababshay wuxuu unaxariista walaalihii ka yar-yar, wuxuu wanaajista afkiisa, wuxuu ixtiraama raga isaga ka waaweyn, wuxuu qadariya kana dambeeya waaridiintiisa iyo asxaabta rafiiqa iyo la da’da ah. Middaas caksigeeda wiilka habaar qabaha ah ee akhlaaqda xun ma laha wax dadnimo ah, laguma oga Ixtiraam iyo naxariis, laga sugi mayo horumar iyo inuu bulshadiisa anfaco hadal wanaagsan iyo feker saliim ahna habartiis bay ka tahay. Ilaahay ha inoo wanaajiyo.
Haddii aan usoo daadego biya-dhaca iyo ujeedada maqaalkaygan, waxaa inta badan website-yada wax ku qoraayay dad badan oo isugu jira kuwa wanaagsan oo dadka wax u faa’ideeya iyo kuwa ay caado & dhaqan ka noqotay hadalada xun xun ee aan loo meel deyin. Waxaan ka xusi karaa Ninka la yidhaahdo DIRIDHABE. Diridhaba waxaad ku caan baxday wax ka sheega iyo cayda rag kaa waawayn oo ku dhali kara misna kaa aqoon iyo waaya aragnimo badan iyo inaad mar kasta farta ku goda deegaan degaanada ka mida oo aanad shaqo ku lahayn aqoona warkeeda daa.
Nin baa waxaa laga sheegay inuu yidhi “hashu maankayga Gadayee ma Masaar bay liqday” Diridhabow ku garan waynaye Haddaan su’aal ku waydiiyo akhlaaq xumada miyaa lagugusoo barbaarshay oo dembiga waxaan uraacanaa labadaada waalid ? mase Macalinkii wax kusoo baray ayaa ku yidhi Ixtiraamka iyo dadnimadu waxay ku jirtaa dadka oo la af-lagadeeyo ? mase waxaad rafiiq iyo oodwadaag la ahayd Doobiile intaa Usgag iyo qurun faraha kula jira ? “inkastoo durdur iyo dabbaal galo Dofaar abidkii ma daahiree” ma ilaahay baa saa kuu khalqay ?, mase waxaad qabatintitay kelamadaha xun ee waliba Cayda ah ee aan ka xishoono haddaan soomaali nahay balse aad moodo inay Pakistan ducaba ka tahay?. sida :- “Saale, Ban chut IWM”. waxaan aad uga xumahay in adoo kale ay ku hadlaan magac bulsho dhan oo leh mid xun iyo mid wanaagsan.
Wiilayahow daloombiyaya, aan wax ku dareensiiye Soomaali meel kasta oo ay joogto, xaalad kasta oo lasoo derista marna ma aha kuwa kala maarmi kara, waa dad xigaal ah oo dhalasho iyo dhiigba wadaaga, waa haddii ay wax ku dhacayaan amma inaba haba yaraatee aad leedahay garasho fayoow. Xumaato saas usii wayn oo dhex taalla haba yaraate ma jirto, shalay ninka manta madaxweynaha ka ah Somaaliya (C/llaahi Yuusuf) waxaa doortay oo u codeeyay kuwii ay hoos katuurka lahaayeen waliba qaarkood colleytan ka dhaxeeyay, maantana garab taagan dowlada uu madaxda ka yahay diyaarna u ah inay naf iyo maalba u huraan, taasi waxay ku garansiinaysa sida dadku walaalo u yahay misna u heshiin karayaan cadowgana iska kaashan karaan. Soomaali waa ummad mar kasta is huran oo aan habbonayn in loo kala warramo. Adiga iyo inta kula midka ah ee ku fekeraya waxaan dani oogu jirin amma dhex mushaaxaya riyo iyo humaag raaca waxaan usheegayaa inaydaan dab, colaad iyo xumaato kala dhex dhigi Karin duul walaala. Qof kasta taariikhda baal buu ka galayaa ee wax iskula har intay hadhow gocasho qeerkaa, facaa iyo asaagaaba kaa reebi lahayd.
Wiilyahow waxaan u malayn inaan aniga kaaga aqoon badnahay deegaanada qaar sida :- Hargaysa iyo Burco mana jecli inaan xumaan ka sheego, adigase waxaad u bareertay inaad wax u dhinto sharafta iyo qadarinta ay mudan yihiin bahweynta aad hal-qabsiga ka dhigatay adoon aqoon ulahayn lana mustawa ahayn. Waar ammaan ha lagaa helo oo afkaaga ka adkow ……… Af-lagaadada iyo borobogaandada aad wadid in lagaaga jawaabo lama garan waayin ee waxa uun la leeyahay :-
Cad haduu dhulka kaaga dhaco amase Ciidoobo
Caqli nimuu ku wayn yahay ma cuno calafka qaarkiiye
Maxaynu kala hadalla waa Caruur Caga wayn wuxuye.
Dhanka kale maqaalkaagi ugu dambeeyay waxaa ka muuqday hanjabaad iyo gooddi iyo waliba hasaawe caruur, waxaad uga dan lahayd maanu garan. In uun ma is weydiisay “dadka aan u goodinayaa yaa weeye ?”, midhaa “Daalka” Pakistan baa ku madax marayee jawaabtu waxaa weeye Maya. haddaad taariikhda iyo dhaqanka somaliyeed wax kaaga baxsanyihiin sal fudeed kuma qaadeen kumana aadan dhiiratee hadalada qaar. Wax isku fal wiilyahow. Waxaad dhowr jeer ku celcelisay Kelmada ah “aniga” ood ku leedahay samsam arrinteeda aniga oo reer somaaliland ah ayaa ka hadlay, waar heedhe wax fiican baad samaysay inaad ka hadashana waajib ku saaran weeye haddaad intaa garatay maba xuma laakiin waxaan halkaa aad isla joogto, Adigu yaad tahay ? Somaliland miyaad Meteshaa ? Miyaanad ogayn inaad tahay shaqsi ka mida shaqsiyaadka dega magaaloyinka Hargaysa iyo Burco, waxaanad ahayn baad is moodaye aayar talaabada qaad, arrinta samsam waxaad kala mid tahay bulshada intaa maqaalada ka qoraysay ee isugu jira mid xaqeeda duudsinaaya iyo mid ka damqanaaya dhibka iyo waxyeelada lagasoo sheegayo. Samsam Ilaah bay leedahay oo ka cayminaya dulmiga loola kasay ee wiilyahow cantarka jooji, haddii waxa laga sheegayo gabdhaas miskiinta ah amma ay kusoo baxaan dhibkaas loo geysaty ogow gobonimada uu carabku kaa bartay inayan meesha oollin.
Dadka uu ku gefay iyo aqoonyahanada uu af-lagaadeeyay waxaan odhan lahaa hadalkii abwanka ee ahaa:-
Ragoow Nin hadduu Gabraar tago
Xabadduu gooni daaqyada iyo
Islahaa ku leged gool
Garanuugta wayda ahiyo gelin hore yac kuma rido.
Diridhabe aragte wuxuu yahay ee hadal ha isaga qaasarinina, aan dhowrno halkuu dhaanka usido. Nin qoyani biyo iskama dhowre qoyaankiisa is ilaaliya.
By. Feysal Rashiid “Nayruus”